Kungani abesifazane beqamba amanga, betha, futhi bashintsha
Ngokuvamile, izizathu zokuthi kungani abesifazane beqamba amanga, bethengisa futhi bashintshe, kuyafana, ngenxa yokuthi kukhona nokuhlukunyezwa kwamadoda, nakuba ngezinye izikhathi bangase bahluke. Isibonelo, abesifazane abavame ukubheka abathandi abazobonakala njengemodeli futhi bashintshe ngomthandi onjalo, ukuze bahambisane kahle ezindaweni ezithile. Futhi, owesifazane ngeke ashintshe ngoba akakwazi ukunqoba ukubiza kwenyama yakhe. Ngokuvamile, owesifazane, ngokungafani nobulili obunamandla, akabonanga isidingo sabalingani abahlukahlukene. Yiqiniso, abantu abaningi bangaphikisana nale mbono. Ngesikhathi samanje, ngokumangalisayo, ubulili obuhle kunezizathu eziningi zokungathembeki kunamadoda.
Isizathu esiyinhloko esenza owesifazane abe amanga, ukukhaphela nokushintsha .
Okokuqala phakathi kwazo zonke ezinye izizathu ezenza abesifazane bashintshe, kukhona ukunganeliseki. Futhi kaningi lokhu ukunganeliseki kuhlobene hhayi kuphela nokuphila ngokobulili, kodwa futhi ngokomoya nangokomzwelo. Isibonelo, indoda ayikwazi ukubonwa owesifazane njengomngane osondelene noqotho njalo njalo. Yingakho lona wesifazane futhi eqala ukufuna lowo ongakwazi ukuqonda imvelo yakhe yemfihlakalo, futhi yebo, kanye nayo yonke into, ukuthola kuwo ukuthi ukunambitheka okhethekile futhi ngesikhathi esifanayo imfihlakalo elula. Futhi konke ngenxa yokuthi indoda, njengomthetho, ingumngane, ongayethemba ngaso sonke isikhathi kunzima kakhulu. Uhlala elambile futhi uqhuma abesifazane ukuze bathole umlingani wokuphinga. Futhi kaningi, esimweni esinjalo, abesifazane bashintshwe ngamadoda anikezwe i-gallantry ekhethekile, ukunakekelwa, futhi, okubaluleke kakhulu, ubuhle obungokomoya.
Isidingo sokuhlonipha .
Ngendlela, bonke abafazi banephupho elilodwa elivamile, elixhunywe neqiniso lokuthi badinga indoda ukuhlonipha futhi kumuntu wabo, noma kunalokho, ukuthi, wakhothama phambi kwabo. Uma lo mzwa ulahlekile futhi umlingani wokuphila uyayigcina - lesi yisizathu sesibili esenza owesifazane aqale ukushintsha. Lapha isidingo sokuhlubuka sihlobene ngokuqondile nokufuna umphefumulo womndeni. Yingakho ubulili obuhle kunabo bonke abathandekayo babo, ngokulandela isoka elisha elizohlala liyakubonga yonke into ekhona emfanekisweni wesifazane. Phela, indoda enhle kunazo zonke yowesifazane ungomunye ongakwazi ukugcizelela ngokucophelela konke okusemandleni okwesifazane ngosizo lokubonga kwakhe. Ngaphezu kwalokho, akufanele abe buthakathaka futhi ngomfanekiso wakhe izimfanelo ezimbili kufanele zihlanganise ngokuphumelelayo: isifiso sokubusa futhi ngesikhathi esifanayo silalele unkosikazi wakho othandekayo. Uma abesifazane bebona lokhu kumuntu, bavele bashintshe umlingani wabo noma isoka.
Ukuphinga njengendlela yokuziphindiselela .
Ngezinye izikhathi, lapho amadoda ngokwabo bethengisa abathandekayo babo, abazishintsha, nabo, nabo, bangenza okufanayo ekuphindiseleleni kubathandekayo. Kulesi simo, isizathu esiyinhloko esenza abesifazane baqambe amanga futhi bawele ekuphandeleni ukuhlukunyezwa kwengqondo. Ngendlela, imbangela enjalo yokukhaphela ayikude nalabo abamele ubulili obuqinile, nakuba emibuthanweni yabo kungavamile kakhulu. Lapha, ukuzingela ngokwayo, okokuqala, kusiza ukunqoba umuzwa wokunganakwa. Iqiniso elithakazelisayo ukuthi ngisho namakhosikazi athembekile, athengiswa ngamadoda abo, angenza ukukhwabanisa okunjalo. Kodwa uma senze lokhu, owesifazane angase abe nomuzwa wokuthi isimo sakhe sangaphakathi nesokomoya sibi nakakhulu. Kodwa kwezinye izimo, isimo singaba yinto engalungile yindoda enesiphambaniso futhi owesifazane angayishintsha ekuphindiseleleni, athambekele othandweni nomthandi wakhe bese uya kuye ukuze angamthetheleli.
Ubuqili ngengozi .
Ngokumangalisa, kodwa ngesinye isikhathi ngenxa yezizathu ezithile imbangela yokungathembeki ingenza ingozi evamile. Lesi sici sokukhwabanisa kufana nalabo abaqondisa amadoda esikhathini lapho ubuhlobo obuseduze bube budedengu futhi buba yisimiso. Kodwa ongathembisi lutho angashintsha ukuphila ngokungazelelwe. Ngaphandle kwalokho, owesifazane akanakuzicabangela ngalolu daba, kepha ukukhohlisa okunjalo kungamenza abe nethandana nomoya wenjabulo, ukuhlukahluka kanye nemizwa emisha. Akusikho embuzweni ukuthi ukuhlukunyezwa kungaba yisizathu sokuqeda ubuhlobo. Phela, ubudlelwane obusinda bungathatha indawo entsha futhi enemibalabala, okuyinto le nkosikazi ezohlala ngayo nomunye umuntu.
Noma ngabe yini oyishoyo, nazo zonke izizathu eziyinhloko zokuthi kungani abesifazane beshintsha bahlobene kuphela ukungabi nalutho kwangaphakathi, ukungabi nakho okuhlangenwe nakho okucacile, ukunganeliseki ngokocansi kanye ne-monotony kuphela emkhayeni womndeni noma imizwa yokupholisa kumlingani, umlingani ohlala njalo. Ngenxa yalokhu, bonke abesifazane balala namadoda abo futhi baqala ubudlelwano eceleni. Ngelinye igama, kungakhathaliseki ukuthi ukuguqulwa kwamasiko kanye namasiko kuyashintsha kanjani, isizathu esihlala njalo sokungathembeki kwabesifazane kuhlale sifisa ukuhlale sithandwa futhi sifuna. Futhi ngokuvamile le nkosikazi ingazizwa kuphela eceleni komthandi wayo.
Futhi ekugcineni, kufanele kuthiwa ngesikhathi lapho abesifazane bethengisa futhi bashintsha emadodeni abo, labo abahlukunyezwayo, bahlukunyezwa ukwedlula lo wesifazane kunzima kakhulu kunamadoda omama. Phela, ukuhlukumezeka kwabantu besifazane kuhlasela kakhulu izindinganiso zokuziphatha nezindoda zamadoda. Kulula kulabo abamele ubulili obuqinile ukuthethelela ukukhwabanisa uma kwenzeka ekuqaleni kobudlelwane ngokwayo, lapho umqondo wobunikazi usabuthakathaka kakhulu. Kodwa uma othandekayo eshintshiwe ngesikhathi "ukuchichima kokuphila komndeni" egcwele - akunakuxolelwa ngokuphelele. Kuleli qophelo, indoda ibheka ukuhlubuka njengokwedluliswa kwangempela, noma ngabe kwakuyinto ejwayelekile ohlangothini. Khumbula ukuthi amadoda angama-proprietors futhi ahlukanisa ama-tapered awo nabanye ngokushaya kwabo ngokuzethemba kwabo. Ngaphezu kwalokho, uma abanye bebazi ngakho, kwenza kube nokuhlubuka okukhulu kakhulu. Ngakho ukuze ukukhwabanisa, okuthandwa ngabathandekayo, kungazange kube sekupheleni kobudlelwano (Yebo, uma ungafuni wena ngokwakho), udinga ukuphendukela kumqondo wezengqondo zomndeni. Phela, abesifazane bashintsha kancane kakhulu kunamadoda, futhi uma bekwenza, banesizathu esihle salokho, okudingeka kukhonjiswe ukuze isimo singabuyi futhi, futhi impilo iphinde igcwale imibala emisha etholakele. Futhi ngeke kube khona ukukhashelwa!
Indlela yokwakha ubuhlobo ngosizo lomthetho wokukhanga?
Indlela yokunqoba umhawu?
Indlela yokududuza intombi
Indlela yokuzizwa njengowesifazane
Kungani ngezinye izikhathi sihlukumeza kakhulu?
Indlela yokuqonda uma owesifazane efanelwe owesifazane
Imiphumela emva kwezandiso zezinzipho
Imithetho eyisisekelo yokunakekelwa kwesikhumba ebusweni nasemzimbeni
Izindlela zanamuhla zokwelapha isifo sofuba
Mikhailov Stas, impilo yangasese
Mini pizza nge anyanisi
Ikhalenda yokusebenza ensimini ngezikhathi zonyaka
I-Kabsa Bil Lahim
Indlela yokukhetha izingubo ezifanele, uma ungemva ngemuva ...
UVavel Priluchny waseMeja uphinde waqeqeshwa eMafiosi
I-tennis enkulu: okuyishumi nambili
Kungcono kakhulu ukukhetha usuku nenyanga emshadweni
Izici zobomi bobulili bomama ozayo